အကယ်၍ သူအသက် ဆုံးပါးသွားခဲ့ရင် AYA BANKကြောင့် ပါဆိုပြီးပြောထားတဲ့ ညီလေး တကယ် ဆုံးပါးသွားခဲ့ – KK Daily News
အကယ်၍ သူအသက် ဆုံးပါးသွားခဲ့ရင် AYA BANKကြောင့် ပါဆိုပြီးပြောထားတဲ့ ညီလေး တကယ် ဆုံးပါးသွားခဲ့
by Guu Guu
မင်္ဂလာပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ Aya bank က ငွေထုတ်မရလို့ သူအသက်ဆုံးပါးသွားခဲ့ရင် Aya ကြောင့် ပါဆိုပြီးပြောထားတဲ့ ညီလေး တကယ် ဆုံးပါးသွားခဲ့ပါပြီ။
“ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘဏ်အနေနဲ့ သူများပိုက်ဆံယူပီးရင် ပြန်ပေးရမှာပဲ။အားလုံးကို မပေးနိုင်ရင်တောင် ကျန်းမာရေးကြောင့် လိုအပ်နေသူတွေကို ဘယ်လို ကူညီနိုင်မလဲဆိုတာ manage လုပ်ထားဖို့လိုတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ management ညံ့တာပါ။
ကိုယ်တွေကို ပိုက်ဆံအပ်တုန်းက နိုင်ငံရေး အခြေအနေမကောင်းရင် မထုတ်ပေးနိုင်ဘူးလို့လဲ ကြိုမပြောခဲ့ဘူးနော်။ပြောခဲ့ရင်တော့ တမျိုးပေါ့။တာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့ ဘဏ်ပါ။” ဆိုပြီးလည်း ပြည်သူတွေ အားလုံးက ပြစ်တင်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
ဆေးကုဖို့ ပိုက်ဆံထုတ် တာထုတ်မရလို့ညီလေး AYA bankနဲ့ ပက်သက်ပြီး နောက်ဆုံး post ကိုအခုလို တင်သွားခဲ့တာကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။
“ဝိုင်းရှဲပေးကြစမ်းပါဗျာ စောက်ရှက် မရှိတဲ့ AYA Bankကိုယ့်ပိုက်ဆံကိုထုတ်ဖို့ ခခယယအကူညီတောင်းတာ တောင်မှ နဲနဲလေးတောင် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိဘူး။Ph ဆက်မှရမှာတဲ့ ဆက်တဲ့ Phတေက တစ်လုံးမှ မကိုင်ဘူး။၂ပတ်ခွဲရှိပီ ဆက်နေတာ အဲ့အတွက်ကို အချိန် ၃ နာရီလောက် ပေးရတယ်။
နေပါစေ သေ သွားရင် AYA bank ကြောင့်ဆိုတာ လူတိုင်းသိပါစေ။ကျွန်တော့်လို တခြားရောဂါသည် ဒီလိုခံစားရမှာပဲ AYA Bank ကိုယ်ချင်းစာတတ်ပါစေ”ဆိုပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၅လပိုင်း ၂၈ရက်နေ့က သူရဲ့ fb accမှာ postတင်ထား ခဲ့ တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောင်ဘဝဆိုတာများ ရှိခဲ့ရင်တော့ ညီးလေးတစ်ယောက် ဒီထက်ကောင်းတဲ့ ဘဝသစ် ကို ပိုင် ဆိုင် နိုင် ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
အကယ္၍ သူအသက္ ဆုံးပါးသြားခဲ့ရင္ AYA BANKေၾကာင့္ ပါဆိုၿပီးေျပာထားတဲ့ ညီေလး တကယ္ ဆုံးပါးသြားခဲ့
မဂၤလာပါ ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ Aya bank က ေငြထုတ္မရလို႔ သူအသက္ဆုံးပါးသြားခဲ့ရင္ Aya ေၾကာင့္ ပါဆိုၿပီးေျပာထားတဲ့ ညီေလး တကယ္ ဆုံးပါးသြားခဲ့ပါၿပီ။
“ဘာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘဏ္အေနနဲ႕ သူမ်ားပိုက္ဆံယူပီးရင္ ျပန္ေပးရမွာပဲ။အားလုံးကို မေပးနိုင္ရင္ေတာင္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ လိုအပ္ေနသူေတြကို ဘယ္လို ကူညီနိုင္မလဲဆိုတာ manage လုပ္ထားဖို႔လိုတယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။ management ညံ့တာပါ။
ကိုယ္ေတြကို ပိုက္ဆံအပ္တုန္းက နိုင္ငံေရး အေျခအေနမေကာင္းရင္ မထုတ္ေပးနိုင္ဘူးလို႔လဲ ႀကိဳမေျပာခဲ့ဘူးေနာ္။ေျပာခဲ့ရင္ေတာ့ တမ်ိဳးေပါ့။တာဝန္ယူမႈမရွိတဲ့ ဘဏ္ပါ။” ဆိုၿပီးလည္း ျပည္သူေတြ အားလုံးက ျပစ္တင္ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။
ေဆးကုဖို႔ ပိုက္ဆံထုတ္ တာထုတ္မရလို႔ညီေလး AYA bankနဲ႕ ပက္သက္ၿပီး ေနာက္ဆုံး post ကိုအခုလို တင္သြားခဲ့တာေၾကာင့္လည္း ပါပါတယ္။
“ဝိုင္းရွဲေပးၾကစမ္းပါဗ်ာ ေစာက္ရွက္ မရွိတဲ့ AYA Bankကိုယ့္ပိုက္ဆံကိုထုတ္ဖို႔ ခခယယအကူညီေတာင္းတာ ေတာင္မွ နဲနဲေလးေတာင္ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္မရွိဘူး။Ph ဆက္မွရမွာတဲ့ ဆက္တဲ့ Phေတက တစ္လုံးမွ မကိုင္ဘူး။၂ပတ္ခြဲရွိပီ ဆက္ေနတာ အဲ့အတြက္ကို အခ်ိန္ ၃ နာရီေလာက္ ေပးရတယ္။
ေနပါေစ ေသ သြားရင္ AYA bank ေၾကာင့္ဆိုတာ လူတိုင္းသိပါေစ။ကြၽန္ေတာ့္လို တျခားေရာဂါသည္ ဒီလိုခံစားရမွာပဲ AYA Bank ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္ပါေစ”ဆိုၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ၅လပိုင္း ၂၈ရက္ေန႕က သူရဲ႕ fb accမွာ postတင္ထား ခဲ့ တာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာင္ဘဝဆိုတာမ်ား ရွိခဲ့ရင္ေတာ့ ညီးေလးတစ္ေယာက္ ဒီထက္ေကာင္းတဲ့ ဘဝသစ္ ကို ပိုင္ ဆိုင္ နိုင္ ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။
၂၆ ရက်နေ့က မအလ ရုရှားမှာ ပစ္စတို ပစ်တုန်းက တစ်ချက်မှ မထိပဲ အရှက်ကွဲခဲ့တယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား ?
မကြာမှီ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအရှိန်အဟုန် မြင့်စွာ တိုးတက် လည်ပတ်နိုင်တော့မည်ဟု ပြောဆိုလိုက်တဲ့ See More
သားသမီးတွေရဲ့ စွန့်ပစ်တာကို ခံခဲ့ရတဲ့ အဖွားကို...
မှာယူထားသည့် စားစရာတွေ သွားပို့ပြီး ပြန်အလာ...
အဘ ဘောမပြီး ဆရာမလုပ်မယ့်အစား CDMလုပ်ပြီးဈေးသည်ဘဝကို...
ကျောက်မြောင်း တာမွေ နားတစ်ဝိုက် ” ပေါင်မုန့်...
အောက်ဆီဂျင် ရရှိနိုင်ဖို့ ၁၁ကြိမ်အထိ...
ဆိုင်ကယ်အပြင် လူပါ မနေ့ကပျောက်သွားပြီး ဒီမနက်မှာ...
Copyright © 2021. Created by dailymmthadin.